Xukuumadda Somaliland oo Go’aan Adag ka soo saartay Shaqaaqada Fadhi-gaab | Aftahan News
Xukuumadda Somaliland oo Go’aan Adag ka soo saartay Shaqaaqada Fadhi-gaab
Hargeysa(aftahannews):- Xukuumadda Somaliland, ayaa go’aammo adag kasoo saartay colaadda kasoo cusboonaatay deegaanka Fadhi-gaab ee gobolka Sanaag iyo dhibaatada nabadgelyo-darrada ee ku soo korodhay Dadweynaha deegaankaas.
WASIIR SICIID SULUB IYO WASIIR XASAN GAAFAADHI 2020
Ugu horrayn wasiirka wasaaradda Qorshaynta Qaranka Xasan Maxamed Cali (Gaafaadhi), ayaa shaaca ka qaaday xukuumaddu go’aan ku gaadhay inay gudato waajibka ka saaran nabadda, islamarkaana la dhaafay waan-waantii iyo sabaalihii arrinta lagu daji jirey, isagoo bulshada qaybaheeda kala duwanna ugu baaqay inay taageeraan dedaalka xukuumaddu ku jirto.
“Waxan halkan kasoo jeedinaynaa go’aan dawladeed oo ah colaaddaas maanta Fadhi-gaab kasoo cusboonaatay waxa lagu gelayaa cudud dawladeed, masuuliyadda nabaddana xukuumaddaa qaadaysa, cid Allah iyo ciddii wax ka taraysaana haku taageerto xukuumadda dedaalkeeda, laakiin maanta cid kale oo loo dirayo oo aan xukuumadda ahayni ma jirto, haddii ay wasiirro tahay, haddii ay ciidan tahay iyo xubno kale tahayba waxa nabaddaas tuurta u ridanaya xukuumadda, taas ayaanu cid kasta ku wargelinaynaa.” Sidaa ayuu yidhi Wasiir Gaafaadhi.
Wasiirka Wasaaradda Xannaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumaysiga Siciid Sulub Maxamed, ayaa dhibaatada iyo colaadaha kusoo noqnoqda deegaanna ku hareeraysan Ceel-Afweyn ku tilmaamay boog ku taalla Somaliland oo aan loo dulqaadan Karin, waxana isaga oo arrimahaas ka hadlayana.
Wasiir Siciid Sulub oo ka hadlaya arrintaasi, waxa uu yidhi; “Markii taladii la rogrogay Aaggaas Ceel-afweyn, iyo darar-weyne iyo Fadhi-gaab iyo inihii wax ka dhacayeen wixii dhawrkii sano ee ugu dambeeyey ka dhacayey waxa ay ku noqotay boog ku taalla Somaliland, waxana ay qarankan ku noqotay dibin-daabyo, dhimasho, magac-xumo iyo khasaare naf iyo maalba ah oo maalin walba taagan.”
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata, ayaa intaas ku daray in xalka kaliya ee xukuumaddu arrintaas u haysaa tahay inay gacan adag ku qabato oo ay tallaabo ka qaato cid kasta oo colaaddaas hurinteeda lagu tuhmo.
“Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan, haddii ay goleyaasha qaranka tahay, haddii ay waxgaradka tahaya, haddii ay culimaa’udiinkii hore u galay tahay iyo haddii ay shacabka wanaagga jecel tahay waxanu idin deeqsiinaynaa xukuumadda in la isku barbar istaago oo aan xal kale loo haynin,” ayuu yidhi Wasiir Siciid Sulub Maxamed.